वैज्ञानिकले भेटे विशाल दाँत, के को होला ? - वैज्ञानिकले भेटे विशाल दाँत, के को होला ? -
उज्यालो प्रतिनिधि २० बैशाख २०७९, मंगलवार प्रविधि
काठमाडौँ । वैज्ञानिकहरुले इचथियोसर प्रजातिको डाइनासोरसको तीन विशाल जीवाश्म फेला पारेका छन् । यी जीवाश्महरुमा एउटा धेरै नै ठूलो दाँत पनि फेला परेको छ । यो एउटै प्रजातिका डायनासोरका भेटिएका दाँतभन्दा निकै ठूलो छ । यसबाट प्रागैतिहासिक विकासको बारेमा धेरैकुरा सिक्न सकिने बताइएको छ ।
हालै जर्नल अफ वर्टिब्रेट पेलियोन्टोलोजीमा प्रकाशित एक अध्ययनले यसबारे बताएको छ । युरोपका अनुसन्धानकर्ताहरुको टोलीले स्विस आल्प्सको कोसेन फर्मेशनमा जीवाश्म पाएका थिए । यो ठाउँमा प्रारम्भिक डायनासोर भेटिएको मान्यता राखिन्छ ।
एक विशाल डायनासोरको दाँत थियोः
यो विशाल दाँतको क्राउन छैन । यो करिब ४ इन्च लामो छ । यो दाँतको जरा कुनै अन्य जलचर सरीसृपभन्दा दोब्बर चौडा छ । वैज्ञानिकको अनुमान अनुसार यो विशाल दाँत हुने जुन जीव छ, त्यसको लम्बाई करिब ४९ फिट भएको हुनुपर्छ । अर्थात्, पूर्ण विकसित ब्लू ह्वेलको लम्बाईभन्दा लगभग आधा । यो ठुलो दाँत देखेर अन्वेषकहरु छक्क परेका थिए किनभने यो विशाल डाइनासोरको दाँत थियो ।
जर्मनीमा बान युनिभर्सिटीमा जीवाश्म विज्ञ तथा यो शोका मुख्य लेखक मार्टिन स्यान्डरले ‘ठूलो सधैँ राम्रो हुने’ बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामीलाई यो विशाल इचथियोसरको आकारभन्दा अरु केही पनि छैन छैन । यो जीवाश्म विज्ञानका लागि एउटा ठूलो लज्जा हो ।’
यो शोध अनुसार यो दाँतबाट इचथियोसरको विशाल आकारबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमार्फत् थाहा हुन्छ कि यो ट्रियासिक इचथियोसर २० करोड वर्ष यहाँ थियो । यिनीहरु आफ्ना साथी डायनासोरको तुलनामा निकै ठूला थिए ।
यद्यपि, यो दाँत विशाल दाँत भएका ठूला इचथियोरसको थियो वा यो औसत आकारका इचथियोसरको । मार्टिन स्यान्डरका अनुसार हिमनदी मुनि अझै ठूला समुद्री जीवनहरुको अवशेष लुकेको हुनसक्छ । जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनको वर्तमान दरलाई हेर्दा उनको यो इच्छा पूरा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।